उहाँले कम्प्युटर बन्द के स्वतः शक्ति र कसरी यो सुविधा स्थापित गर्न थाह यदि औसत प्रयोगकर्ता सोध्न भने, अक्सर जवाब छैन। यस्तो मानिस सफलतापूर्वक आफ्नो कार्यहरू को साँघुरो सर्कल solves र सञ्चालन प्रणालीमा कुनै पनि अतिरिक्त सफ्टवेयर को प्रयोग पनि लाग्छ गर्दैन। साँच्चै, किन, सबै कुरा काम गरिरहेको छ भने।
तर कुरा गरौं। कसरी उदाहरण, ग्याँस ताप लागि, कम्प्युटर बन्द स्वतः शक्ति हो र? तिनीहरूलाई बीच एक साधारण के, या त मामला मा प्रगति विकास धारण। मान्छे भएपछि, एकदम राम्रो बाँचे आगो माथि soaking, तर कसैले पहिले मा आगो राख्न प्रयास , ईटा को पर्खाल ध्यान सिर्जना गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ एक चुलो थियो, र त्यसपछि यो पाइपलाइन मा ग्याँस मार्फत बाल्न थाले आगो। त्यस्तै, कम्प्युटर कार्यक्रम को मामला मा - तपाईं बस थप सुविधाहरू प्रयास गर्न आवश्यक छ। पक्कै पनि आफ्नो थप प्रयोग कठिन हुनेछ नत्याग्नुहोस्। एक यस्तो सफ्टवेयर क्षमताहरु - कम्प्युटर बन्द स्वतः शक्ति।
सामान्य रूपमा, एक उदाहरण सुरु गरौँ। निस्सन्देह, प्रत्येक प्रयोगकर्ता कम्तिमा एक पटक इन्टरनेट देखि ठूलो फाइल डाउनलोड गर्न भएको थियो। एक हडताली उदाहरण चलचित्र र अन्य कार्यक्रम को तथाकथित बग्नेछन् छ। ठीक छ, वैश्विक नेटवर्कमा जडान को गति इंजेक्शन को पूरा केही मिनेट पर्खनुहोस् गर्न आवश्यक छ पहिले त्यो त उच्च छ भने। तर के कार्यक्रम केही घण्टा अनुमानित समय प्रदर्शन भने? निस्सन्देह, केही समय, र तपाईं कम्प्युटर मा काम गर्न सक्छन्, डाउनलोड लागि प्रतीक्षा पूरा छ, तर सम्भावना सधैं मामला छ। यस मामला मा, आदर्श समाधान तपाईंको कम्प्युटर बन्द स्वतः शक्ति हुनेछ: यो समाप्त लोड भएको आफैले बन्द छ। यो मनिटर बन्द गर्न पर्याप्त छ, र आफ्नो व्यापार बारे जान सक्नुहुन्छ - इलेक्ट्रनिक सहायक कार्य आफैलाई गर्न।
उदाहरणका निम्न चलचित्र सम्बन्धित छ। ओछ्यानमा जानुअघि एक फिलिम सत्र व्यवस्था गर्न भन्दा के राम्रो हुन सक्छ? यो सोफा मा सुत्न धेरै तर्कसंगत स्क्रिनको अगाडि घण्टा बस्न, र सहज भनेर स्पष्ट छ। अन्त दर्शक लागि प्रतीक्षा बिना निन्द्रा गर्न धेरै सजिलो छ - यो मुख्य "खतरा" छ। त्यसपछि बिहान यो कम्प्युटर व्यर्थमा सबै रात काम थियो बाहिर जान्छ। यो एक स्वचालित शक्ति बन्द समारोह गरेर बचा गर्न सकिएन। र यो छ! यसबाहेक, धेरै अपरेटिङ सिस्टम मा।
Windows7कम्प्युटर स्वतः बन्द-बन्द कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? यो समस्या धेरै तरिकामा हल गर्न सकिन्छ। तिनीहरूलाई प्रत्येक लाभ को एक नम्बर छ, त्यसैले चयन प्रयोगकर्ता आवश्यकताहरु अनुसार बनेको छ। त्यसैले, आफ्नो सिस्टम बन्द उपयोगिता को भाग। प्रमुख संयोजन विन + R प्रेस र लाइन मा रंगरुट बन्द -S -टी 1800. प्रणाली ट्रे मा बन्द 30 मिनेट पछि हुनेछ भन्ने सन्देश प्रर्दशन गर्दछ। 1800 सेकेन्ड 30 मिनेट =। रद्द पनि सम्भव छ: बन्द -A। यो बेफाइदा: को कमी एक ग्राफिकल इन्टरफेस को कार्यअनुसूचक, जो सेवा असक्षम हुन सक्छन्, र basing।
तिनीहरूले धेरै बढी अवसर छ किनभने, तेस्रो-पक्ष आवेदन प्रयोग गर्न सजिलो। एक भन्दा सुविधाजनक, वास्तविक प्रोसेसर को - एक PowerOff विकासकर्ता Koeniger। यो नेटवर्क प्याकेटहरू र मापदण्डहरू एक नम्बर पठाउन, यस CPU लोड खातामा लाग्न सक्छ। कार्यक्षमता को उच्च स्तर भए तापनि यो पनि एक साईट बुझ्न सक्षम हुनेछ।
अधिकतम एकीकरण प्रेम हुन सक्छ रोचक ग्याजेटहरू तपाईं (रूपमा केही आवेदन संग हुन सक्छ) को GUI प्रणाली फरक हुनेछ चिन्ता गर्न सक्दैन, विन्डोज7को लागि बन्द हामीलाई एक विकल्प तिनीहरूलाई बास गरौं। जबकि अन्य थप अवसर प्रदान तिनीहरूलाई केही, अत्यधिक विशेष उत्पादनहरू हुन्। एकदम धेरै जस्तै निःशुल्क ग्याजेटहरू को विशाल वैश्विक नेटवर्क, त्यसैले यसलाई मात्र टिप्न एक ठीक आफ्नो आवश्यकता फिट रहनेछ।
स्टार्टअप प्रोग्राम के हो?
विन्डोज Aero, यो छ कि
मास्को मा निजी नर्सरी: ठेगाना, मूल्य, विवरण
हस्तलेखन किन तपाइँलाई स्मार्ट बनाउनुहुन्छ?
यो लागू हुन्छ जो बक्समा के छ?
पेट्रोल जेनरेटर5किलोवाट। पेट्रोल सर्जक: अवलोकन, प्रकार, सुविधा र समीक्षा
टेबल शीर्ष कण बोर्ड को बने - सस्ती र व्यावहारिक